आफ्नै छात्रासँग कक्षा कोठा भित्र नै यि शिक्षकले गरेको अश्लिल हर्कत यसरी बाहिरियो, तस्विर बने भाइरल
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा एकजना शिक्षक र स्कुले छात्राको केही फोटो सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ । कुनै कक्षामा लिएको प्रस्ट रुपमा देखिने यी फोटोहरुमा शिक्षकको अंगालोमा बेरिएकी एक युवती
विश्वका नाम कहलिएका विमानस्थललाई फेल खुवाउने यस्तो छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाईन | (हेर्नुहोस भिडियो)
Running an airport isachallenging business and making it turnaprofit is no mean task. A perfect coordination of humans and machines on tarmac keeps an airport up
भारतीय ज्वाईलाई छोरा हो भन्दै झुटो विवरण दिएर नेपाली नागरिकता बनाउन खोज्ने सासु र ज्वाई प्रहरीको फन्दामा
जनकपुरधाम, ३ पुष । नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन आफ्नै ज्वाईलाई छोरा हो भनेर गलत विवरण पेश गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ज्वाईलार्य छोरा हो भन्ने सासु र नेपाली
सुपरस्टार ज्याकीको छोरीले गरिन् केटीसंग विवाह, छोरीको लेस्बियन अफेयरका बारेमा थाहा पाएपछि परिवारले गर्यो तिरस्कार
एजेन्सी । सुपरस्टार ज्याकी च्यानकी छोरी एटा एनजीले केटीसंग विवाह गरेको खबरले अहिले हलिउडमा निकै चर्चा बाहिरीएको छ । उनीहरुले विवाहको फोटो सार्वजनिक गरेपछि हलिउडमा निकै चर्चा भएको हो ।
मोवाइलमा भएको महत्वपुर्ण फोटो डिलिट भयो ? यसरी गर्नुहोस् रिकभर
काठमाडौं, ३१ साउन । आफुले आफ्नो स्मार्टफोनमा कैद गरेको फोटो (तस्बीर) सँगै हाम्रो कयौँ यादहरु जोडिएका हुन्छन् । आजभोलि बजारमा भिभिन्न ब्रान्डका स्मार्टफोन हरु पाईन्छ । अक्सर गरेर हामि पनि
पान्डब खानी सहयाेग समाज हँकङ्ग द्वारा क्यान्सर पिडित जमुना बि.क लाई अार्थिक सहयाेग
गुरुदत्त न्याैपाने/लाईट नेपाल बाग्लुङ्ग पान्डबखानी निवासि क्यान्सर पिडित जमुना बि.क लाई हँकङ्गमा बस्नुहुने सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदि बहिनी हरु साथै हँकङ्ग पान्डबखानी सहयाेग समाज काे संयुक्त प्रयासमा हँकङ्गमा संकलित
मनसुन सक्रिय : आगामी तीन दिनसम्म देशभर वर्षा हुने, बाढी पहिरोबाट बच्न विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध
काठमाडौँ, १६ असार (रासस)/ मनसुन सक्रिय भएसँगै आगामी तीन दिनसम्म देशका पूर्व र पश्चिमका धेरै जसो स्थानमा वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानको अवस्थाबारे
न्युजरुममै पसेर अन्धधुन्ध गोली, मारिए ५ पत्रकार
एजेन्सी । अमेरिकाको म्यारिल्याण्डमा रहेको एक स्थनीय अखबारको कार्यालयमा बन्दुकधारीले अन्धधुन्ध गोली प्रहार गर्दा पाँच पत्रकारको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते भएका छन्। क्यापिटल ग्याजेट नामक पत्रिकाका कर्मचारीहरुका अनुसार
काठमाडौं, १४ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७५ साल वैशाख महिनामा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह एमए प्रथम वर्षको ग्रामीण विकास विषयको परीक्षाको परीक्षाफल बुधबार
कतारमा आप्रवासीका लागि पीआर सुविधा
एजेन्सी । कतारले आप्रवासीलाई स्थायी बसोवास अनुमति ९पीआर० दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो देशमा भएका विदेशी आप्रवासीहरूलाई पीआर उपलब्ध गराउने कानून पारित गरेसँगै यस